ဘာနေရဲ့ အတွေးလေးများ: 2010
ကျနော်က ခုမှသာ ကွန်ပြူတာကို လက်နဲ့ ရင်းနှီးနေတာ ငယ်ငယ်ကနေ ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ကွန်ပြူတာကို မကိုင်ဖူးဘူး သေချာ လည်း မမြင်ဖူးဘူး .
Posted by ဘာနေ ... at 12:33 PM
ငါ့ စိတ်ကူးတွေဆိုတာ တားဆီးမဲ့ ဟင်းလင်း၊
ငါ့ မှာသာအမြင်တွေ လျှော့ပစ်ရ၊
ဘ၀ဆည်းဆာနေ၀င်မဲ့ အချိန် ငါရောက်လို့လာ
ပြောင်းလဲစရာ - ငါရှာ ရှာသာရှာ ဘယ်မှာမှ ငါမတွေ့ ။
ခုဖြင့်သည်မှာ .....မရဏ စက်ပေါ်
သေမင်းကခေါ်ဖို့ ........ ချောင်း
သိပြီကွာ (ဒါ .ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့)
ငါပြုနိုင်ကောင်းရဲ့ အဲသည်အခါ --
when i was young and free my imagination had no limit
as i grew older and wiser , i discovered the world would not change
but it , too seemed improvable.
as i grew into my twilight year,in one least desperate attempt,
i settled for changing only my family,those closest to me,
but alas,they world have none of it.
and now as lie on my deathbed,i suddenly realize;
if i had only known myself first , then by example
form their inspiration and encouragement,
who knows, i may even changed the world.
Posted by ဘာနေ ... at 4:20 PM
သူ သို့ မဟုတ် ငါ
ကျုံမငေး မောင်ဝင့်သူ ရဲ့ ကဗျာလေးပါ ဖတ်ကြည့် ရအောင်......
* ငါ့၌ မရှိ
ရှိကား .. ရှိ၏ ၊ သူ မသိ
ငါ မြင်တွေ့ ၏ ၊ ငါသိ၏ ။
* သူ့၌ မရှိ
ရှိကားရှိ၏ ၊ ငါ မသိ
သူမြင်တွေ့၏ ၊ သူသိ၏ ။
သူသည် အတ္တ ၊ ကြီးလွန်းစွဟု ၊
ငါသည် အတ္တ ၊ ကြီးလွန်းစွဟု ။
* သြော်..........အတ္တ ကြီးမာ
သူပင်လားလေ ၊ ငါလားလေဟု
နတ္ထိ အတ္တ ၊ ရှာ မရပြီ
ဘဝ မျက်ကန်း ၊ ဖြစ်ကြမှန်းကို
စူးစမ်း သိရှိ ပါတော့ ၏ ။ ။ ။
Posted by ဘာနေ ... at 10:50 PM
အတိတ်ရယ် အနာဂတ်ရယ် သူ့မှာ မရှိ
သူချလို့ အောက်ကိုလည်း ကျနိုင်တယ်
သူ့ လုပ်ချက်တွေ မကြမ်းစေဖို့
ခပ်ရင့်ရင့်မီးထဲ သူ့ကို ညှင်းဆဲ မယ်ဆိုရင်
Posted by ဘာနေ ... at 4:18 PM
(((အတွေးများ အိပ်စက်နေသည် တဲ့လေ.)))
ဘဝဆိုသော အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း မှာပဲ ခေါင်းရော ပန်းရော ရောနှောနေလေရဲ့
စိတ်ဆန္ဒများက ငါ့အတွက် အရမ်းကားဆုံးရန်သူ ဖြစ်နေတာ ခုမှသိလိုက်ရတယ်
သေချာတယ် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါဟာ လွတ်ကျသွားမဲ့ အိုးတစ်လုံးဆိုတာ
ပန်းမကြိုက်တတ်ပေမဲ့ ပန်းပင်တွေကိုတော့ စိုက်နေဆဲပါ
ရူးစေတတ်တယ်လို့ ပြောပေမဲ့ ပတိုင်းသီးကို ကိုက်စားနေဆဲ
အဖိုးတန်ပတ္တမြားလို့ပြောပေမဲ့ ငှက်ပစ်လေးခွမှာ အသုံးပြုဖို့ တာစူနေတယ်.
ခုချိန်ထိ နေ့နဲ့ ညဆိုတာကို ရှေးသူမတို့ ဆိုလို့သာ ခွဲခြားတတ်နေမိ
ပိုက်ဆက်တွေ ပြင်နေဆဲပဲ ဘာအတွက် တပ်ဆင်နေတယ်ဆိုတာ မသိရိုးဖြစ်နေမိတယ်
စကားတစ်လုံး တည်ဆောက်လိုက်ပေမဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဖြစ်သွားတာကိုတော့ မတတ်နိုင်ဘူး
ခေတ်တွေပြောင်းတယ်ပြောတိုင်း အမြီးရှည်လာသလား လေတွေပိုလာသလား မေးယူရတယ်
အခက်ကြီးနဲ့ ခက်လိုက်တာဆိုပြီး သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင်မိတယ်
မိုးရွာတယ်ဆိုတာ အထက်ကနေ အောက်ကို စီးဆင်းတာပါ
ထူးဆန်းနေတယ် အောက်ကနေ အထက်ကို စီးဆင်းမဲ့ မိုးရွာတော့မလို့တဲ့
ကိုင်း ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ မော်ဒီဖိုင်းဖြစ်လာတဲ့ ကျုပ်တို့ခေတ်မှာ
လူတိုင်းလည်း အသက် ဘယ်ကရှုရမယ်ဆိုတာကို မေးယူရမလိုဖြစ်နေတယ်..
အခါခါမှား အခါခါပြင်ဖို့ ဝန်လေးနေတဲ့ ခေတ်
ငေးကြည့်ရုံသာကြည့်နေပြီးတော့ ဘယ်ရောက်မလဲ တောင်ထိပ်ကို
ဖုန်နံ့ရှူချင်ကြတဲ့ လူများကြောင့် လမ်းတွေကိုဖုန်…….လို့
အတွေးတွေက ရှေ့ဆောင်တတ်တယ်လို့ ပြောကြပေမဲ့
ကောင်းပါတယ် ဘာပြောပြော ဗူးသီးတစ်လုံးရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး တသသလုပ်နေရတယ် အဖြစ်
နှစ်တွေကိုနောက်ပြန်ရေတွက်ရင်း အရင်က သမာဓိတွေကို ပြန်ယူချင်နေမိတယ်
ခုတော့ အိမ်မက်များက အိပ်ရေးပျက်လို့ထင်ပါရဲ့ ငါ့ကိုလာမနှိုးနဲ့တဲ့ ……။
Posted by ဘာနေ ... at 4:53 PM
Labels: ဘ၀ နှင့် အမှန်
ကျနော် အမြဲတမ်းဖတ်ချင်၍ ကူးယူထားပါသည် .
လက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်တာနဲ့ အရာအားလုံးကို ကိုယ်ဖမ်းဆုပ်မိပြီလို့ ထင်နေခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ လေကိုတောင် ကိုယ်ဖမ်းဆုပ်မမိခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ကိုထောင်မတ်ပြီး ပုခုံးကိုစွင့်ကားတာနဲ့ ကိုယ့်လက်နှစ်ဘက်က ဗလာလို့ ခံစားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် လောကတစ်ခုလုံးက ကိုယ့်ရင်ခွင်မှာ...
Posted by ဘာနေ ... at 12:38 PM
Posted by ဘာနေ ... at 10:30 PM
Posted by ဘာနေ ... at 12:37 PM
Posted by ဘာနေ ... at 9:42 PM
၈။ အနှစ် ရှိသော လူဖြစ်ရေးနှင့် ဘ၀တစ်ခုရပ်တည်မှု
သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်ပါ သူအသက်ရှင် သန်မာ ကြီးထွားဖို့ မြေ၊ရေ၊လေ၊ နဲ့ အလင်း လိုအပ်ပါတယ် ဒါတွေ အချိုးကျကျ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှ ကြီးထွားနိုင်မယ် နောက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်၇ှိမှ အသက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ် .. အဲ့ဒီလိုပဲ လူတစ်ယောက်ဟာ သစ်ပင်တစ်ပင်လိုပါပဲ သက်ရှိတစ်ခု ဖြစ်တည်ဖို့ ကြီးထွားဖို့ အဖက်ဖက်ကလိုသလို သဘာဝဘေးအန္တရယ်လို့ခေါ်တဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ အရာလေးတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှ ကြီးထွားမယ် ဖွဲ့ဖြိုးမယ် အောင်မြင်မယ် ...ဒါကြောင့်
Posted by ဘာနေ ... at 9:54 AM